Eksodho 33 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
33 Zvino Jehovha akatizve kuna Mosesi: “Enda, ibva pano, iwe nevanhu vawakabudisa munyika yeIjipiti,+ muende kunyika yandakapikira Abrahamu, Isaka naJakobho, ndichiti, ‘Ndichaipa vana vako.’+ 2 Ndichatuma ngirozi mberi kwako,+ ndodzinga vaKenani, vaAmori, nevaHiti nevaPerizi, vaHivhi nevaJebhusi;+ 3 muende kunyika inoyerera mukaka nouchi,+ nokuti handizoendi ndiri pakati penyu, nokuti muri vanhu vane mitsipa yakaoma,+ kuti ndirege kukutsakatisai munzira.”+ 4 Vanhu vacho pavakanzwa shoko iri rakaipa, vakatanga kuchema;+ uye hapana kana mumwe wavo akapfeka zvishongo zvake. 5 Jehovha akati kuna Mosesi: “Iti kuvanakomana vaIsraeri, ‘Muri vanhu vane mitsipa yakaoma.+ Munguva pfupi+ ndingapinda pakati penyu ndikakuparadzai. Naizvozvo bvisai zvishongo zvenyu, sezvo ndichida kuziva zvandichakuitirai.’”+ 6 Vana vaIsraeri vakabvisa zvishongo zvavo kubvira paGomo reHorebhi+ zvichienda mberi. 7 Zvino Mosesi akatora tende rake, akaridzika kunze kwomusasa, kure nomusasa; akaritumidza kuti tende rokusanganira. Zvino vanhu vose vaibvunza+ Jehovha vaienda kutende rokusanganira, rakanga riri kunze kwomusasa wacho. 8 Mosesi paaingobuda achienda kutende racho, vanhu vose vaisimuka,+ mumwe nomumwe omira pasuo retende rake, vonyatsotarira Mosesi kusvikira apinda mutende racho. 9 Zvino zvaiitika ndezvokuti kana Mosesi angopinda mutende racho, shongwe yegore+ yaiburuka, yomira pasuo retende, uye iye aitaura+ naMosesi. 10 Vanhu vose vaiona shongwe yegore+ yakamira pasuo retende, uye vanhu vose vaisimuka, mumwe nomumwe okotama ari pasuo retende rake.+ 11 Jehovha aitaura naMosesi zviso zvakatarisana,+ sezvinoita munhu kana achitaura nomumwe wake. Paaidzokera kumusasa, mushumiri wake+ Joshua, mwanakomana waNuni,+ zvaaiva mushandi, aisabva mukati metende racho. 12 Zvino Mosesi akati kuna Jehovha: “Tarirai, muri kuti kwandiri, ‘Tungamirira vanhu ava,’ asi imi hamuna kundizivisa kuti ndiani wamuchandituma naye. Uyewo imi makati, ‘Ndinokuziva nezita,+ uye ndakunzwirawo nyasha.’ 13 Zvino, ndapota, kana mandinzwira nyasha,+ ndapota, ndizivisei nzira dzenyu,+ kuti ndikuzivei, kuti mundinzwire nyasha. Yeukai kuti rudzi urwu vanhu venyu.”+ 14 Naizvozvo iye akati: “Ini pachangu ndichaenda newe+ uye ndichakuzorodza.”+ 15 Iye akati kwaari: “Kana imi musingaendi, musatibvisa pano. 16 Zvino zvichazivikanwa sei kuti mandinzwira nyasha, ini nevanhu venyu? Ini nevanhu venyu hatina kusiyaniswa nevamwe vanhu vose vari panyika nokufamba kwenyu nesu here?”+ 17 Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Ndichaitawo chinhu ichi chawataura nezvacho,+ nokuti ndakunzwira nyasha uye ndinokuziva nezita rako.” 18 Iye akati: “Ndapota, ndiratidzei kubwinya kwenyu.”+ 19 Asi iye akati: “Ini ndichaita kuti kunaka kwangu kwose kupfuure nepamberi pechiso chako,+ ndichazivisa zita raJehovha pamberi pako;+ uye ndichanzwira nyasha wandichanzwira nyasha, uye ndichanzwira ngoni iye wandichanzwira ngoni.”+ 20 Iye akatiwo: “Haukwanisi kuona chiso changu, nokuti hakuna munhu angandiona akararama.”+ 21 Jehovha akatizve: “Heino nzvimbo iri pandiri, iwe unofanira kumira padombo. 22 Zvino kubwinya kwangu pakunenge kuchipfuura, ini ndichakuisa mumukaha uri padombo, ndichakuvharidzira nechanza changu kusvikira ndapfuura. 23 Pashure paizvozvo ndichabvisa chanza changu, uye iwe uchaona shure kwangu. Asi chiso changu hachingaonekwi.”+